कोरोना संकट र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस |
कोरोना संकट र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस
प्रकाशित मिति :2020-05-01 10:05:46
-डा. बिन्दा पाण्डे-
विश्वका श्रमिक एक होऔ” भन्ने नाराकासाथ दुनियाभरका श्रमिकहरुको बीचमा ऐक्यवद्धता, सहकार्य र सह—अस्तित्वको अनुभुतीसहित श्रमजीवी वर्गलाई एउटै मालामा बाध्ने दिनका रुपमा अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस) मनाइन्छ । हरेक उत्पादन पुजी र श्रमको संयुक्त लगानीको प्रतिफल हो । यसैले “उत्पादित वस्तुवाट प्राप्त हुने प्रतिफल दुवै पक्ष बीच न्यायोचित वाडफाड हुनुपर्दछ । वर्गिय शोषणको अन्त्य र श्रमजीवी वर्गको अधिकारको रुपमा कामको निश्चित समय, उचित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधाको व्यवस्था र मानवीय व्यवहार“को मागसहित श्रमिकहरु मैदानमा उत्रदा उनीहरुमाथि दमनका पर्रा छुटे र आन्दोलनकारीले शहादत प्राप्त गरे । तर पनि, भोको पेट र दासतावाट मुक्ती खोज्दा दागिने गोली स्विकार्य छ भन्ने उच्च मानसिकतासहित वर्गिय मुक्तीका खातिर बलिदान भएका योद्धाहरुको सम्झना र सम्मानमा यो दिवस मनाउन थालियो । श्रमिक अधिकारको पक्षमा भएकोे यो बलिदानी आन्दोलनको प्रतिकका रुपमा अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) मनाइरहदा हरेक श्रमजीवीको छाती गर्वले ढक्क फुल्छ ।
त्यही विच न्यायालय, संसदिय समिति, नागरिक समाज लगायतको निर्देशन-सुझाव र खवरदारीले अन्तत, संघिय सरकार केही लचिलो भयो । काठमाडौमा रहेका जिल्लाका अगुवा र सम्बन्धित पालिका विचको समन्वयमा श्रमिकहरु गाउ फर्कन थाले । मानव समुदायमा थपिदै गएको आक्रोसको सेफ्टी भल्भ विष्फोट हुनु अगाडी नै खुल्यो । आज धेरै श्रमिकहरु गाउ पुगेका छन । मानविय सुरक्षा अनुभुतीकासाथ गाउमा कुटो कोदालो र हलो डल्लेठो समाउन थालेका छन । उनिहरुको गाउ प्रस्थानले शहरमा राहत वितरणमा सहजता देखिएकोछ । गाउमा खेतीपाती लाग्दा भोलीका लागि खाद्य सुरक्षामा पनि टेवा पुग्ने निश्चितछ । अझ पनि प्रवासी श्रमिकको समस्या व्यवस्थापन भएको छैन । सायद सिमा नाका र हवाइ यातायातको बन्दाबन्दीको अन्त्य कुर्नुको विकल्प छैन । सम्बन्धित मुलुकको सरकारले मानविय व्यवहार गछौ भन्ने आश्वासनले मलहमको कामसम्म गरेको छ ।
कोरोना र लकडाउनको प्रभाव महिलामा फरक ढंगले परेकोछ । एक, महिला माथिको हिंसा रोकिएको छैन । वरु विश्वव्यापी रुपमा नै हिंसा बढेका समाचारहरु आएका छन । यस किसिमका समस्यालाई सम्वोधन गर्ने संयन्त्रको वारेमा खासै ध्यान पुगेको देखिदैन । दुइ, घरमा गरिने काम महिलाको भन्ने सोच र व्यवहारमा गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन । र, यस किसिमको कामलाई श्रमको रुपमा पनि लिइदैन । तर, लकडाउनमा विद्यालय-कार्यालय जाने सदस्य समेत दिनभरी घरै रहने कुराले आम रुपमा महिलामाथि कामको भार थपेको छ । अझ घरवाट कार्यालयको काम पनि गर्नुपर्ने ९वर्क फ्रम होम० महिलाहरुमा यसलो वोझ कै रुप धारण गरेका कुराहरु आएका छन ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस २०७७ को हार्दिक शुभकामना ।
स्रोत: डा. पाण्डेको ब्लगबाट